China, nke nwere oke ọhịa, siri ike na njikwa nsị. Ọ bụrụ na agwọghị ụmụ ahụhụ dị n’ọhịa n’oge, ọ ga-emetụta gburugburu ebe ndị ọzọ. Yabụ, anyị kwesịrị itinye oke ikuku na oke ahụhụ. Omenala a na - ejikarị ọgwụ eji egbu ọgwụ eme ihe ...
Osisi akwukwo osisi nke na-agbaso nkweko nke nkenke ugbo
Anyị maara na nha nke akwukwo ebe metụtara ike nke photosynthesis, ma na-egosiputa itinye n'ọrụ nke ike anyanwụ, isi iyi ike. Anyị nwekwara ike ịgbanwe mpaghara ahịhịa iji melite mmiri iji arụmọrụ nke ahịhịa ndụ, ma nwekwa ikike ụfọdụ ịmịkọrọ fatịlaịza, ...
Otito onye na-enyocha ihe nyocha nke ọma na-eme ka ihe ọkụkụ na-amịpụta ihe ka mma
Anyị niile maara na uto nke ihe ọkụkụ chọrọ mmiri na nri. Ọdịnaya nke mmiri na nri ndị dị na ala na-emetụta uto nke ahịhịa. Mgbe nri ala dị oke elu, ọ ga-etolite oke ihe oriri nke ihe ọkụkụ, na-ebute mmụba nke nri ala na formatio ...
Akwukwo ihe nyocha bu ihe di nkpa na usoro nke nyocha ihe omimi. N’ime ihe ọkụkụ nke oge a, mkpebi siri ike nke mpaghara ahihia abụwo akụkụ dị oke mkpa. Ngwaọrụ a bụ ngwa nyocha dị ezigbo mkpa. A na-ejikarị ya atụ ma dekọọ akwukwo osisi bụ ...
Canopy nyocha iji mata ezi uche nso akuku nke kụrụ
Onye na-enyocha ihe mkpuchi na-arụ ọrụ dị mkpa na uto nke ihe ọkụkụ, ọ dịkwa nnukwu mkpa ịmara ezi ihe ọkụkụ nke ihe ọkụkụ. Canopy bụ akụkụ nke ihe ọkụkụ a hụrụ site n'elu ruo na ala, nke dị ka okpu. Ndị na-eme nchọpụta na-achọtakarị ụfọdụ “ihe nzuzo” banyere osisi sitere na ya. Ta ...
Chlorophyll mita nwere ike inyocha ọdịnaya nke chlorophyll nke osisi n'oge ọ bụla
Chlorophyll mita bụ otu n'ime ngwaọrụ nyocha nke physiology osisi. Isi ọrụ ya bụ ịchọpụta ọdịnaya nke chlorophyll na epupụta. Ole chlorophyll na-emetụta uto nke osisi ozugbo. Nzọụkwụ mbụ nke photosynthesis bụ ịmịkọrọ ike ọkụ site na chlorophyll na ionize ya ....